Gịnị bụ iTunes Library? a
> Resource> iTunes> Gịnị bụ iTunes Library?
iTunes n'ọbá akwụkwọ pụtara ihe niile n'ihi na iTunes. Ọ bụ a nchekwa data iji chekwaa niile ọmụma bara oké uru na faịlụ iji hazie music na ihe ndị ọzọ. Ya mere, ọ pụrụ ịbụ dị ka nnukwu dị gigabyte dabere na otú ọtụtụ music i nwere. Ọ bụ ezie na iTunes Library bụ a ibu, ọ bụ naanị dere abụọ faịlụ: iTunes Library.xml na iTunes Library.itl.
Ebe iTunes Library Files Chọpụta
Abụọ n'ọbá akwụkwọ faịlụ chọta n'otu nchekwa, ma nwere dị iche iche ụzọ Mac na Windows ígwè ọrụ. Ha na-eji iTunes maka dị iche iche na nzube. Lee n'okpuru maka ozi ndị ọzọ.
Mac OS X: / Ọrụ / aha njirimara / Music / iTunes /
Windows XP: C: Documents na SettingsUSERNAMEMy DocumentsMy MusiciTunes
iTunes Library.itl faịlụ
The ndọtị aha "itl" pụtara kpọmkwem iTunes n'ọbá akwụkwọ. Otú ọ dị, tupu iTunes 10.4, The iTunes ọbá akwụkwọ ahụ nwere dịghị otú ahụ ndọtị aha Mac. Ebe ọ bụ na a nchekwa data faịlụ, iTunes Library.itl dị oké mkpa n'ihi na iTunes. Ọ na-echekwa ọmụma gị songs, listi ọkpụkpọ, na ụfọdụ song-ozi metụtara. Ọ bụrụ na ị na-ewepụ faịlụ a, iTunes ga-ike a ohuru otu, n'ihi ya, ọ bụla listi ọkpụkpọ, song Fim, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na-efu.
Site na-eke multiple iTunes ọba akwụkwọ, ị ga-enwe multiple tent nke iTunes n'ọbá akwụkwọ faịlụ - dị iche iche nchekwa. I nwere ike họrọ na-emeghe nke n'ọbá akwụkwọ site na-ejide ala Option (Mac) ma ọ bụ Mgbanwe (Windows) isi mgbe na-agba ọsọ iTunes.
Rịba ama: Ị nwere ike iweghachi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na Time Machine na Mac, n'ihi na iTunes Library.itl bụ nanị iTunes n'ọbá akwụkwọ faịlụ na-kwadoo Time Machine ndabara.
iTunes Library.xml faịlụ
XML e mere ibufe ma ụlọ ahịa data. iTunes-eji nke a haziri nke ọma na-adị mfe nghọta format-ekwurịta okwu na ndị ọzọ ngwa dị ka iPhoto, iDVD, na iMovie. Ya mere, ị nwere ike mfe tinye iTunes music gị oru ngo.
iTunes Media nchekwa
iTunes ugbu a bụghị naanị na ọ pụtara music, kamakwa video, akwụkwọ, pọdkastị, wdg E wezụga iTunes Ọbá akwụkwọ, iTunes nwekwara ike iji iTunes Media nchekwa na-echekwa ndị ọzọ data. Ikekwe ị ga-esi ndị a stof na iTunes Media nchekwa:
1. Music na artworks dọwara si CD.
2. iTunes Store ịzụrụ.
2. Ọ bụla ọzọ ihe ị dị n'ime iTunes (chọrọ nhọrọ "Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ" na iTunes Mmasị).
Olee otú ndabere gị iTunes Library ka mpụga Drive
Otú nyefee zụrụ ihe si iPad ka iTunes